Ihe ịma aka nke ime njem Mecca | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Asia njem
Anyị niile anụwo banyere ya Mecca, "Njem a gara Mecca", "dị ka ịga Mecca" na nkebi ahịrịokwu ahụ, mana ikekwe mmadụ ole na ole n'ime anyị ezutela onye gara ebe ahụ n'ezie.
Ma ọ bụ ya Mecca bụ naanị maka ndị Alakụba ya mere ọ bụrụ na ọ bụghị Alakụba okpukpe gị ị gaghị enwe ike ime ka ahịrịokwu ahụ bụrụ eziokwu. Chekwa ebe dị anya, njem Mecca bụ ụdị Camino de Santiago, njem pụrụ iche n'ezie, nke a na-apụghị ịkọwa akọ na echefu echefu ka anyị hụ ihe ọ bụ.
2 Gaa na mecca
3 Ebe njem na igwe mmadụ
Na ụkpụrụ ị kwesịrị ịma na ọ bụ obodo dị na Saudi Arabia. Obodo a nwere nnukwu akụkụ nke peninsula nke Arabia na oke Jordan, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain. Yemen, Oman na Osimiri Uhie.
Site na inwe obodo abụọ dị ezigbo mkpa maka Islam ọ bụ ala dị nsọ. Ana m ekwu maka Mecca kamakwa nke Medina. Kemgbe nchọpụta mmanụ na 30s, mba ahụ agbanweela yana dịka ị maara nke ọma, taa mpaghara a dị oke mkpa maka ndụ anyị na Western na onye isi ike.
Mecca bụ obodo kachasị nsọ na Alakụba ma ọ bụ maka nke ahụ A machibidoro ndị na-anaghị ekpe okpukpe a ịbanye. N'akụkụ aka nke ọzọ Onye ọ bụla Alakụba ga-emerịrị njem uka Mecca ọbụlagodi na ndụ ya.
A na-akpọ njem a Hajj ọ bụkwa otu n’ime ogidi ise nke Islam. Onye Alakụba ọ bụla toro eto kwesịrị ime ya, ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọ bụrụ na o nwere ego ọ ga-eji wee mee njem ahụ ma ahụike ya kwere ya. Ezinụlọ ndị dara ogbenye enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya mgbe niile ka etinye ego ka otu onye otu nwere ike ịme njem ahụ.
El Hajj enwere ike ime na ọnwa nke Du na-hijjah ya mere enwere puku kwuru puku na puku mmadụ ndị na-aga njem uka. Ihe karịrị ijeri mmadụ na ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-ekwu maka mbugharị nke nde mmadụ abụọ na Saudi Arabia site na ụbọchị ahụ.
Njem a na-agụnye nleta nke Alakụba Nsọ, Kaaba, Mina, Hill nke Arafat na Jabal Rahma, Muzdalifah, Jabal Al Thur, Jabal Al Noor, Masdij e Taneem, Hudaibiyah, Ja'aronah na Jannat ui Mualla. Ha bụ saịtị dị ka ihe dị nsọ n’ihi na Muhammad gafere, kwuo okwuchukwu ikpeazụ ya, e lie ndị ibe ya, ebe ọ gara, wdg.
Ọ bụrụ na njem njem a na-ewere ọnọdụ n’ọnwa ọzọ, a maara ya site na aha ọzọ: Umrah. Mecca dị nsọ n’ihi na ọ bụ ebe ahụ ka e buru ụzọ gosipụta Okwu Chineke n’aka onye amụma Muhammad..
Kaaba na gburugburu ya nwere akụkọ ndị na-efu na mmalite oge. Dịka ọmụmaatụ, enwere akụkọ na Adam liri na Mecca ma ọ bụ na nna Abrham, bụ Abraham, wuru ya na nwa ya nwoke bụ Ishmael.
Gaa na mecca
Enyere visa pụrụ iche maka njem ala nsọ ka ndị Alakụba nke ụwa wee bịaruo ndị nnọchi anya obodo anya ma hazie ha. Ọ bụ ọtụtụ akwụkwọ na -achọ ihe ọmụma siri ike n'aka onye njem ahụ. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị Alakụba ga-eme njem ahụ ee maọbụ ee na nwoke ga-eme onye nlekọta ọ gwụla ma ha dị afọ iri anọ na ise ma ọ bụ karịa ma gaa njem n'otu otu yana ikike di ha.
E kenyere mba ọ bụla ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ nke visa njem. Nọmba a na-atụle ọnụọgụ ndị Alakụba bi na mba ahụ mana n'ezie dabere na ọnụọgụ ndị njem na-arịọ ya maka ọnwa. Echiche bụ na enweghị ọtụtụ nde mmadụ karịrị akarị n'ihi na ọ nwere ike ịgba aghara.
Onye onye amụrụghị nwere ike ịga njem? Ọbụghị ncha ncha. A onye na-abụghị onye Alakụba kwesịrị ịnọ kilomita iri na ise site na Mecca na Medina. Ọ bụrụ na achọpụta onye na-ekweghị ekwe nso, ọ nwere ike ịta ahụhụ nnukwu ntaramahụhụ.
Iji gaa na saịtị dị nsọ ị ga-abụ Muslim, amụrụ ma ọ bụ gbanwee. Mana ọ bụrụ na ọ bụ nke abụọ, a ga-enyerịrị nke a na akwụkwọ ikike visa yana ikike sitere na etiti Alakụba etinyela aka na ọzụzụ ndị Alakụba ha na akwụkwọ ntughari kwekọrọ ga-egosipụta.
Ngwa ngwa, Etu esi aga Mecca? Zọ kachasị ọsọ bụ site na ụgbọ elu iji Jedah. Obodo a nwere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke ejiri naanị maka Hajj ma ọ bụ njem uka na Mecca. Nke a n’akụkụ Oké Osimiri Uhie, n’ebe ọdịda anyanwụ nke mba ahụ, ọ bụkwa ya nwe obodo nke abụọ kacha biri na ya.
Site Jeddah la Mecca ma ọ bụ Medina bụ awa ole na ole. Nwere ike ịga ebe ụgbọ ala, n'okporo ụzọ, na-eme njem ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala. Lọ ọrụ ụgbọ ala bụ SAPTCO mana ị ga-ahụkwa ọtụtụ ụgbọ ala ụdị ụgbọ ala.
Enwere ọdụ abụọ na Jeddah, otu agwakọtara na nke ọzọ bụ maka ndị Alakụba naanị, Haram al Sharif. N'otu oge n'okporo ụzọ ahụ, enwere ụlọ ọrụ ndị uwe ojii yana ndị na-abụghị ndị Alakụba. Ndị mmadụ, na nkenke, na-agagharị na ụgbọ ala, bọs na obere ụgbọ ala Ha adịghị ọnụ ma ị nwere akara na Arabic na Bekee.
Kemgbe 2010, metro ejirila usoro ise ọgbara ọhụrụ rụọ ọrụ ma na-arụ ọrụ iji jikọọ sistemụ ahụ na saịtị niile dị nsọ, yabụ ikekwe n'ọdịnihu ọ ga-adị mfe na ọsịsọ ịkwaga.
Zọ ala dị iche iche nwekwara ike iru ya. Iji maa atụ, site na Damaskọs gbadata n'ụsọ Oké Osimiri Uhie. Obodo dị nso na Saudi Arabia bụ Tabuk na ókè ndị uwe ojii na-akpachara anya n'ihi na ha achọghị ka ndị mba ọzọ na-abịa ịchọ ọrụ ma dinara na ngọpụ nke njem njem.
Yabụ, ị ga-eweta tiketi njem njem na ego. Ọbụna ị ga-akwụ ụgwọ ego nye onye ọrụ pụrụ iche, a na-akpọ mutawwif, Onye na-ahụ maka ebe obibi, njem, ntuziaka na enyemaka ndị ọzọ na Mecca.
Site Tabuk onye nwere ike ịga n'ihu njem Medina, obodo ahụ Onye Amụma Muhammad gara site na Mecca na 622 mgbe a jụrụ ya maka ọrụ ya. Ebe a tọrọ ntọala Alakụba na ọ bụ ebe enwere ili nke Muhammad. Ebe Medina bụ obodo nke Muhammad, Mecca bụ obodo nke Allah.
A na-achịkwa ọnụ ụzọ Medina n'ihi na dị ka saịtị dị nsọ ndị na-ekweghị ekwe agaghị abanye. Enwere ọtụtụ njikwa oge niile. Mgbe nleta iwu gasịrị, ndị njem ala nsọ na-ewerekarị tagzi dị ogologo iji rute Mecca, na-agafe ọzara.
Na Mecca enwere ọtụtụ họtel, nke ụdị dị iche iche, ọbụlagodi Hilton, yabụ ọnụahịa dị iche iche. Ka ụlọ nkwari akụ ahụ dị nso na ụlọ alakụba dị nsọ, ọ ga-adị elu karịa ọnụego ya. Enwere ọbụna ụfọdụ ndị dara oke ọnụ nwere nnukwu echiche nke obodo ahụ, mana cheedị ọnụ ahịa ya.
Ebe njem na igwe mmadụ
Ọtụtụ n'ime anyị etolitewo na ihe oyiyi ndị a na akụkọ: ịlụ ọgụ na ìgwè mmadụ gbakọrọ na Mecca. Ma ọ bụ eziokwu, kwa oge na-abụ ihe na-eme. Cheedị banyere mmadụ abụọ ma ọ bụ nde atọ ọnụ ...
N'agbanyeghị ole njikwa dị, o siri ike igbochi stampụ ka oge na-aga, enweela ọnwụ narị, ma na Kaaba, ama ojii ojii a ma ama, na n'okporo ụzọ, na akwa ochie na ọhụụ ọhụrụ.
Ọtụtụ nde mmadụ na-esi n'otu ebe dị nsọ pụọ gaa na nke ọzọ, dị ka ebili mmiri mmadụ nke si Muzdalifah gawa Mina, ihe dị ka kilomita atọ site na ya, iji hụ ebe Muhammad wedara Setan ala. Mgbe ụfọdụ ebili mmiri na-asọ, oge ndị ọzọ ọ na-agbachi ... dị ka ndụ n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Ihe ịma aka nke ịga Mecca
Ihe ị ga-ahụ ma mee na Riviera Maya